Translate Samoan to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Samoan to Myanmar (Burmese), Samoan to Myanmar (Burmese) translations, Samoan to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Talofa oamai oe မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
E i ai se tasi? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Ou te alofa tele ia te oe ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
E fia le pili o lenei hamburger? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
E mafai onaetaʻua aʻu o se taxi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Faanoanoa tele ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
tulou lava တဆိတ်လောက်
Ou te fiafia ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
O laʻu malaga na tolopoina အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Ua ou i ai iinei mo pisinisi ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Talofa, o loʻu igoa မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Ua ou sese, ae ua ou faaipoipo ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Ou te fia fesili atu ia te oe ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
E mafai onaeave au i le malaevaalele? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
O leale taimi i le taimi nei, faamolemole? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
O fea le ofisa lata ane o leoleo? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
E mafai ona ou nono lau telefoni telefoni faamolemole? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
E mafai onaefesoasoani mai? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Tuʻu mai se vai inu, faamolemole? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
E fia le tau? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Ua ou maʻi i le pulu ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Valaau se fomaʻi ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
E i ai se fomaʻi? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
E mafai ona i ai sau valaʻau? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Valaʻau mai ia te aʻu lou pule faʻamolemole. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
O lenei nofoagaemanaia tele ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Ave aʻu i le faletalimalo faʻailoa ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
O leale numera o loʻu potu? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?